Donald Trump Tao Meksika: Tsy Nankasitrahan’ny Meksikana Ny Fitsidihana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2016 16:52 GMT
Pikantsarin'ny valan-dresaka nataon'ny Filoha Peña Nieto sy Trump taorian'ny fihaonan'izy ireo mitokana. Nampitaina tao amin'ny YouTube.
Nanao fitsidihana tao an-drenivohitra Meksikana ny Alarobia 31 Aogositra 2016 teo i Donald John Trump kandidàn'ny Antoko Repoblikana hilatsaka hofidiana ho Filohan'ny Etazonia Amerika mba hanao fihaonana manokana amin'ny Filoha Meksikana Enrique Peña. .
Niely ny vaovao ny alina talohan'izay fa nanaiky ny fanasan'ny Filoha Peña ilay kandidà amerikana ao amin'ny Trano Fotsy, izay efa nanasa ihany koa ny kandidàn'ny Antoko Demokratika Hillary Clinton mba hihaona aminy. Na dia izany aza, Donald Trump ihany aloha hatramin'izao no nanaiky.
Nitatitra ny vaovao ny kaonty Twitter ofisialin'ny Filoha Meksikana :
Nanasa ny kandidà ho filoham-pirenena any Etazonia ho eto Meksika aho, mba hiresaka momba ny fifandraisan'ny roa tonta. Mandray an'i Donald Trump aho rahampitso.
Nahazo fanakianana maro tao amin'ny tambajotra sosialy Meksikana ny zava-misy. Naneho ny tsy hafaliany avy hatrany ireo mpisera tao amin'ny Twitter :
Alarobia , 11 ora .
Kianjan'ny Anjelin'ny Fahaleovantena : ” Tsy mila , EPN ‘ ‘ , ‘ ‘ Trump, tsy tonga soa ianao ”
Tena mahatsiaro ho tohina noho io fanasan'i @EPN an'i @realDonaldTrump aho
Mety ho paikady tsara ny fanasana an'i #Trump aty Meksika mba hampidi-doza azy, kanefa fantatsika tsara fa tsy mpahay tetikady i #EPN …. eny e !
Azo adika amin'ny hevitra roa ny fanasana ho an'ilay mpanao gazety Gabriel Guerra ( manana mpanjohy maherin'ny 75.000 ao amin'ny Twitter) :
Anisan'ny fampielezan-kevitra izany ho an'i #Trump, dokambarotra natao fotsiny. Fanamby tena mampidi-doza ho an'ny fitondran'i #EPN.
Niteraka fankahalana ho an'ireo olom-pirenena Meksikana sy ny Meksikana-Amerikana ny fanehoan-kevitra mamingavinga ireo Meksikana nambaran'i Trump nandritra ny fampielezan-keviny, indrindra fa ny fampanantenany hanorina ny manda teo amin'ny sisintany mampifandray an'i Etazonia sy Meksika mba hampitsaharana ny fifindra-monina.
Noho ilay fihaonana tsy nampoizina, nanomboka nanontany tena ny olona hoe inona no anton'ny fitsidihana. Nandefa ity hafatra manaraka ity i Elizabeth Rivera – mpamoaka lahatsoratra ato amin'ny Global Voices Amerika Latina :
Hay !!! Izay vao takatro , hanao fanambarana miaraka i #EPN ( Enrico Peña Nieto ) sy #Trump fa ny Vondrona BTP Higa no hanangana ny manda.
[Fanamarihana : fikambanan'orinasa nahazo ny fifanarahana tolotr'asam-panjakana fanamboarana isan-karazany ny Vondrona Higa nandritra ny naha-governora an'i Enrique Peña tao amin'ny Fanjakan'i Mexico. Ankoatra izany, ity vondrona ity ihany koa no nanolotra trano faran'izay mihaja ho an'ny vadin'i Atoa Peña, tantaram-panafintohinana iray antsoina hoe “Casa Blanca ” ]
Nilaza toy izany koa i Joselo Herrera :
Tonga eto Meksika i Donald Trump mba hanolotra asa ho an'ny Meksikana rehetra . HANANGANA NY MANDA .
Niantsona tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ao Mexico ny fiaramanidina manokana an'ilay mpanefoefo Amerikana (fantatra amin'ny anarana hoe Trump Force One ) manodidina ny tamin'ny 1:30 folakandro ny 31 Aogositra – kanefa mazava ho azy fa voarara ny fipetrahan'ireo sidina manokana eto amin'ity seranam-piaramanidina ity. Avy eo niakatra tao anaty angidimby manokan'ny governemanta Meksikana izy mba ho any Los Pinos (fonenan'ny filoha) hanao fihaonana manokana .
Nandritra ny fitsidihan'i ” Don ” ( araka ny anaram-bositra nomen'ny mpiray tanindrazana sasany azy) tao Los Pinos, nivory manodidina ny sarivongana famantarana ny Ángel de la Independencia ( ny Anjelin'ny Fahaleovantena ) ny mpanao fihetsiketsehana tokony ho telopolo eo ho eo ho fanoherana ny fahatongavan'ilay milionera .
Hetsi-panoherana tao Meksika manohitra ny fitsidihan'ny kandidàn'ny Antoko Repoblikana ho filoham-pirenena ao Etazonia. Sarin'ny mpanoratra.
Nanome valan-dresaka ny Filoha Peña sy ny vahininy taorian'ny fihaonany tao Los Pinos. Nanamafy ny filazan'ny filoha ny fampitam-baovao mahazatra nasionaly fa ” mendrika ny fanajan'ny rehetra ny Meksikana”, etsy andanin'izany, liana tamin'ny valinteny nomen'ilay kandidà Amerikana momba ny mandan'ny sisintany malaza ratsy ny fampahalalam-baovao vahiny : ” manan-jo hanorina manda Etazonia mba hampitsaharana ny fifindra-monina, kanefa mbola tsy misy resaka ny hoe iza no handoa ny fanorenana”.
Nanao famintinana ity fihaonana ity i Jorge Ramos mpanao gazety :
Lasa tsy nisy fialan-tsiny i Trump, tsy nisy fanajana ireo Meksikana sady tsy nanova na inona na inona momba ny fandaharan'asany miady amin'ny fifindra-monina.
Niteny toy izao manaraka izao i Ricardo Anaya, mpitarika ny hetsiky ny mpanohitra ara-politika an'i Enrique Peña :
Navelan'ny governemanta hanambany ireo Meksikana i @realDonaldTrump raha tokony mitaky azy hanao fialan-tsiny izy ireo. Tsy azo ekena izany.
Ary i Robert Valencia, mpiara-miasa amin'ny Global Voices, naneho hevitra amin'ny anjara asan'ny filoha Meksikana :
Tsy nahay nanararaotra hitondra an'i Trump eny amin'ny manda i @EPN, vao maika nanamafy ny maha-mpitarika tsy manam-panahy azy.
Ankoatra ny adihevitra noho ny fanasana ny mpanefoefo Amerikana , tafaroboka tao anatin'ny fitsikerana maro i Peña taorian'ny famoahana ny fanadihadian'ny mpanao gazety, izay nampiseho fa naka tahaka tamin'ny asa karoka izy [mg]. Ho an'i Trump kosa mandritra izany dia nidina ny isanjatony ao amin'ny fitsapan-kevitra amin'ny fifidianana azy amin'ny Novambra ho avy izao . .